Semtalku wuxuu kuu siinayaa 7 Talooyin Surefire ku saabsan sida loola dagaallamo ciqaabta dambiyada
Webka adduunka (ama internetka) waa mid cajiib ah. Waxay bixisaa warar, isboorti, madadaalo, dukaameysi online ah iyo adeegyo kale oo ka mid ah raaxada qolka fadhiga oo leh gujinta badhanka. Kaalay inaad ka fekerto, internetku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto fanka sanada farsamo oo ka soo horjeeda kumanaan mitir milatari, aragtida, dib u eegista iyo qiimeynta filimada, ka shaqeynta guriga iyo wixii la mid ah.
Si kastaba ha noqotee, inta aad ku riyaaqi laheyd sahlanaanta iyo qarsoodiga internetka, waxay la timaadaa khataro halis ah. Hackers, scammers online, iyo tuugada aqoonsiga ayaa laga yaabaa inay helaan macluumaadkaaga gaarka ah. Sidaa darteed, waa inaad ilaalisaa kombuutarkaaga, xogta qarsoodiga ah iyo dhaqaalaha ka imaanaya dembiilayaasha internetka.
Talooyinkan 7, oo ku xusan khabiirka hoggaamiyaha ah ee Semt Adeegga Dijital, Ryan Johnson, waa inay kugu soo bilowdaan.
1. Ka ilaali aqoonsigaaga
Ma ogtahay in malaayiin qof ay noqdaan dhibbanayaasha xatooyada aqoonsiga sanad kasta? Tani waxay ku xiran tahay tirakoobyada ay bixiso Guddiga Ganacsiga ee Federaalka. Ha noqon dhibbane. Macluumaadkaaga shakhsiga ah haddii lagu dhaco gacmo qalad ah waxaa loo isticmaali karaa in laguugu duubo lacagtaada shaqo adag. Sidee bay u helaan macluumaadkan? Waa hagaag, waxay ku dabaqaan khayaanada kalluumeysiga - halkan waxay kuu soo diri doonaan email ahaan, faafin ama qoraal ah oo ku andacoonaya inay tahay hay'ad kalsooni leh (midda aad sida caadiga ah ku ganacsato) raadinta inaad cusbooneysiiso astaantaada.
2. Iska ilaali hanjabaadda kaluumeysiga adigoo:
Uma jawaabin emails, pop-ups ama fariimaha qoraalka ah ee weydiinaya macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Uma raacin wax damaanad ah sida wac lambarka ama laguu wareejiyey shabakad sida ku qoran farriinta, qoraalka ama emailka.
Waa kuwan xaqiiqda ah inaad ogtahay: waad soo bandhigi kartaa xogta shakhsi ahaaneed. Haddii iyo haddii kaliya haddii qofku helo kalsooni. Akhri siyaasadda asturnaanta ee bogga aad ku socoto. Ogow haddii xogta la siiyo dhinacyada saddexaad iyo sababta? Had iyo jeer la shaqeeyaan shabakadaha leh https: // address. Waa ammaan.
3. Hel barashada qofka aad la tacaaleyso
In dunida virtual, waxaa jira khiyaamo, sida ay ka jiraan dunida dhabta ah..Nasiib daro, ma ogaan kartid adigoo kaliya fiirinaya boggooda internetka. Dambiileyaasha Cyber ​​waa dad caqli badan. Waxay u gudbi doonaan ganacsi sharci ah. Haddii aad rabto inaad wax iibsato internetka, fiiri waxyaabahan soo socda:
Wac iyaga. Haddii aanay telefoonku soo gaadhin, ka dibna dukaameysi meelo kale.
Raadi faallooyin ku saabsan ganacsiga.
Iska ilaali inaad faylka la wadaagto shabakadaha asaliga ah (p2p). Sidaas oo kale waxay u oggolaan kartaa in xayawaannada iyo ransomware ay ku faafaan nidaamkaaga si ay u abuuraan wareeg ah oo loo marayo xogta gaarka loo xaday.
4. Dib u cusbooneysii antiviruskaaga iyo ilaaliyahaaga
Haddii aad inta badan ku bixiso internetka, markaa firfircoonkaaga kumbuyuutarka iyo antivirus waa in had iyo jeer la socdaa oo la cusbooneysiiyaa. Marka la eego, barnaamijyada antivirus cusub ayaa leh tijaabo lacag la'aan ah. Bixinta khidmadda rukunka si aad ugu raaxaysato waxtarka guud. Gaaban, samee dab-damis, ku rakib barnaamijka antivirus (version updated) iyo software anti-spyware anti.
5. Dib u cusbooneysii shabakada internetka iyo nidaamka hawlgalka
Isticmaal nuqulkii ugu dambeeyey ee shabakada webkaaga intaad ku socoto nidaam sharci ah. Iska ilaali nidaamka qalliinka ee burcadnimada.
6. Badbaadinta sirtaada
Isticmaal nidaam maareynta erayga si aad u ilaaliso furahaaga sirta ah. Ha ku wadaagin furahaaga sirta ah faylasha qoraalka wax kasta. Haddii loo baahdo, isticmaal farsamooyinkan:
Iska ilaali magacyada shakhsiyaadka sida tan la qiyaasi karo.
Isticmaal ugu yaraan toddoba jibbaar ah oo doorbidaya in lagu dhajiyo alfabaha leh tirooyin iyo astaamo gaar ah.
Isticmaal furaha kala duwan ee ereyada kala duwan.
Beddel lambarka sirta ah.
Isticmaal aqoonsi laba-heer ah oo loogu talagalay xisaabaadka muhiimka ah.
7. Samee qorshe B
Waxay noqon kartaa fikrad caqli-gal ah had iyo jeer si loo helo qorshe gurmad. Tusaale ahaan, halkii aad haysato dhammaan faylashaada muhiimka ah ee aad ku kaydsaneysid kombuyuutarkaaga, faylasha kor u fuuli daruuraha ama ku gubo DVD.
Haddii aad ka shakisan tahay in xayawaanka ay ku dhejiyaan jeegga iyo xaqiijinta in software aad antivirus, firewall iyo anti-spyware ka kor iyo socotaa Source .